Farmaajo oo la kulmaya RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Lafta-Gareen iyo Qoor-Qoor ayaa dhexdhexaadinaya labada dhinac, waxayna isku dayayaan inay Maanta kulansiiyaan, si loo soo afjaro isjiid-jiidka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay ogaatey Keydmedia Online, Farmaajo ayaa saacadaha soo aadan ka fariin doono RW Rooble si ay uga wadahadleen mushkiladda ka dhex aloosan, kadib markii ay soo dhex-galeen khilaafkooda Madaxda Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Qoor-Qoor iyo Lafta-Gareen ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay ku sugnaa Muqdisho, iyagoo kulamo gaar gaar ah la yeeshay Farmaajo iyo Rooble, oo kala hadleen joojinta xiisadda jirta.
Illo ku dhaw Villa Somalia ayaa u sheegay KON inay jirto rajo ku aadan inay kulmaan saacadaha soo aadan, waxaana dhinac Farmaajo ka jira culeyyo badan iyo shuruudo uu soo bandhigay.
Shuruudaha Farmaajo waxaa kamid ah inuu Rooble faraha kala baxo maamulka hay'adaha amniga, sida magacaabista taliyeyaasha iyo xilka qaadista, islamarkaana uu diiradda saaro doorashadda iyo amnigeda oo kaliya.
Farmaajo go'aankiisa inuu carqaladeeyo doorashadda waa mid lawada arkay, iyadoo musharixiinta mucaaradka ay shalay soo saareen qoraal ay uga digayaan faragelinta uu sameynayo.
Lama oga in ay mira-dhali doonto waan-waanta socota, maadaama ay jiraan arrimo culus oo aan si dhaqsa ah ku xalismi karin, hadii uusan imaan tanaasul labada dhinac midkooda sameeya.
Waxaa qasan xaaladda NISA, oo labo taliye loo magacaabey, sidoo kale wasaaradda amniga ayaa kamid noqotay meelaha la isku hayo, oo Farmaajo diidan yahay in la bedelo wasiirkeeda.
Khilaafka Farmaajo uu abuurey wuxuu dhaawacayaa hanaanka doorashooyinka iyo amniga dalka, waxaana laga cabsi qabaa inuu abuuro dagaal markale ka dhaca magaaladda Muqdisho.